Diyaar u ah in la raro dhammaan cabbirka bacda xashiishka
Waxaan badiyaa qabanaa shaqada OEM, taas oo macnaheedu yahay waxaan soo saari doonnaa bacaha iyadoo loo eegayo nooca bacda aad u baahan tahay, cabirka, qalabka, dhumucda, daabacaadda iyo tirada. In kasta oo hadda ay jiraan baahiyo waaweyn oo diyaar u ah in la rarto bacaha, ka dib ayaan la kulannaa suuqa, waxaanan isku dayeynaa sida ugu fiican inaan kuu sameyno naqshadaha ugu fiican iyo tayada adiga.
Bacda xashiishka ee la daaweyn karo
Istaag boorsada qufulka xiran waa nooca ugu badan ee loo isticmaalo xirxirida xashiishka, iyadoon loo eegin ubaxyada la qalajiyey ama kafeega, sonkorta, buskudka lagu daro CBD ama THC. Macaamiisha badankood waxay jecel yihiin dusha dhalaalaya oo leh daaqad, sidoo kale hadda waxay ku ogaanayaan daabacaadda UV inay tahay isbeddel cusub.
Bacda bacda xashiishka jumlada ah ee Shiinaha
Xashiishadda, sida ubaxyada la qalajiyey, sida caadiga ah dadku waxay dooran doonaan bacaha istaaga maxaa yeelay waxay u baahan tahay meel ballaaran. In kasta oo kaabsoolada qaarkood, boorsooyinka yar yar ee jawaanku ay noqon doonaan xulasho wanaagsan. Waxaan sameyn karnaa ugu yar 4 * 5cm boorso, halka cabirka guud yahay 5 * 12cm, sida boorsada Carttel ee hoose. Sidoo kale xitaa bacda xashiishka yar, waxaad ku sameyn kartaa matt, dhalaal dhalaalaya ama UV, bireed ama la'aan, daaqad, jiinyeer, iwm.